अ’चम्मको गडियाघाट माताको मन्दिर जहाँ पानीबाट दी’यो बा’लिन्छ – Allindiabc
Home/अन्तर्राष्ट्रिय/अ’चम्मको गडियाघाट माताको मन्दिर जहाँ पानीबाट दी’यो बा’लिन्छ
अ’चम्मको गडियाघाट माताको मन्दिर जहाँ पानीबाट दी’यो बा’लिन्छ
संसारका केहि ठाउँमा अचम्मका घ’टनाहरु घटिरहन्छन् भगवानलाई कसैले मान्छ’न् त कसैले मा’न्दैनन पनि भगवानलाई जुन ठाउँका मा’निसहरुले मान्दैनन् त्यहि ठाउँमा भगवानको च’मत्कारलाई धेरै विश्वास गरिन्छ । मानिसहरु प्रत्येक दिन मन्दिर जा’न्छन्, पूजा गर्छन र दीयो बाल्छन् । तर के तपाईलाई थाहा छ ?
काठमाडौं । पतन्जलीका बाबा रामदेवले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को औषधि बनाएको दाबी गरेका छन् ।मंगलबार रामदेवले कोरोनिल नामक आयुर्वेदिक औषधि सार्वजनिक गरेका हुन् । यसको क्लिनिकल कन्ट्रोल स्टडी र ट्रायल दुवै भएको उनले बताए ।
उनकाअनुसार दिल्ली सहितका सहरमा भएको क्लिनिकल कन्ट्रोल स्टडीमा २८० जना संक्रमित सहभागी थिए । उनले भने, ‘शतप्रतिशत विरामी ठीक भए, एक जनाको पनि मृत्यु भएन ।’
क्लिनिकल कन्ट्रोल ट्रायलमा भने १०० जना सहभागी थिए । उनीहरुमध्ये ६९ प्रतिशत संक्रमित ३ दिनमै ठीक भए भने सात दिनमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो ।रामदेवको दाबी छ, ‘हाम्रो औषधिको शतप्रतिशत रिकभरी रेट छ, शून्य प्रतिशत डेथरेट छ ।’
उनका अनुसार यो औषधि बनाउन अश्वगन्धा, तुलसी लगायतको प्रयोग गरिएको छ ।
अन्य समाचार, जीवनको के भ’र छ र । आज यहां भोलि कहां, कस्लाई के थाहा छ र । साच्चै मानिसले आफ्नो भविष्य देख्ने भए ? कति मानिस जसले अ’कालमै ज्या’न गुमाउन पर्छ, उनिहरु कति खुसी हुन्थे होलान् । यस्तै एक बि’दार’क घ’टना मकवानपुरमा घ’टेको छ । हेटौंडामा मंगलबार बिहान मृ’त अ’वस्थामा एक युवतीको श’व फे’ला प’रेको छ ।
अन्य समाचार – कोरोना भाइरसको महामारीले विदेशी भूमिमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सरकारले आज पनि उद्धार जारी राख्ने भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार विहीबार कुवेत, ओमान र मलेसियाबाट ३ सयभन्दा बढी नेपाली आज आउन लागेका हुन् ।कुवेतमा आममाफी पाएका १५० जना, ओमानबाट १८० र मलेसियाबाट पनि केही नेपाली आउँन लागेका हुन् ।
कुवेतबाट नेपालीलाई लिएर जजिरा एयर काठमाण्डौ आउनेछ । ओमानबाट सलाम एअरको चार्टर्ड उडानमार्फत १८० नेपाली स्वदेश फर्कने छन् भने मलेसियाबाट हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर्ड उडानमार्फत नेपालीहरू स्वदेश फर्कने छन्।
सरकारले यही जेठ २३ गतेबाट विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार सुरू गरेसँगै कुवेतमा रहेका नेपाली पनि स्वदेश फर्कन लागेका हुन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारतबाहेक ३३ मुलुकका २४ हजार १४८ जना नेपालीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा नेपालमा ल्याउनुपर्नेछ ।
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या २० पुगेको छ ।बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–६ की ४६ वर्षीया महिलाको कोरोनाबाट मृ’त्यु भएको हो ।नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचाररत महिलाको सोमबार साँझ साढे ६ बजेतिर मृ’त्यु भएको थियो।
मंगलबार राति आएको उनको पीसीआर रिपोर्टमा कोरोना संक्रमण देखिएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । ३० जेठमा अस्पतालमा भर्ना भएकी उनको आइसीयूमा उपचाररत अवस्थामा ज्यान गएको हो ।
अन्य समाचार । अमेरिकामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट संक्रमित हुनेको संख्या २० लाख नाघेको छ । जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या २० लाख ४६४ पुगेको छ ।
कोरोना भाइरसबाट विश्वको सबैभन्दा धेरै प्रभावित मुलुक बनेको अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि एक लाख १२ हजार ९२४ पुगेको छ । पछिल्लो समय अमेरिकाले परीक्षणलाई विशेष जोड दिएको छ । अहिले अमेरिकामा दैनिक करिब पाँच लाख कोरोना परीक्षण हुने गरेको छ ।
अन्य समाचार, न्युजिल्याण्ड- ओसेनिया मुलुक न्युजिल्यान्डले भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको छ। नयाँ संक्रमित र सक्रिय केस बाँकी नरहेपछि न्युजिल्यान्डले कोरोना भाइरसमुक्त भएको घोषणा गरेको हो। आइसोलेसनमा राखिएका अन्तिम बिरामीमा ४८ घण्टायता कुनै लक्षण नदेखिएको जनाइएको छ ।
अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका पाँच लाख ३३ हजारभन्दा धेरै संक्रमित निको भइसकेका छन् । कोरोना भाइरसबाट दोस्रो सबैभन्दा बढी प्रभावित राज्य ब्राजिलमा अहिलेसम्म सात लाख ७२ हजारभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् ।
अमेरिकामा ९९ हजार भन्दा बढीको सङ्ख्यामा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु
कोरिया रोग नियन्त्रण महाशाखाले निकाल्यो यस्तो नयाँ नियम ! उल्लङ्घन गरे कारबाही हुने
दक्षिण कोरियामा २४ धण्टा भित्र बढ्यो कोरोना संक्रमितको संख्या
पाकिस्तान बिमान दुर्घटना : यस्तो थियो पाईलटले कन्ट्रोल रुमबिच भएको अन्तिम कुराकानी